दशैं अगाडि लकडाउन ? – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/दशैं अगाडि लकडाउन ?
काठमाडौं। विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले नेपालमा पनि आफ्नो क्षेत्र फराकिलो बनाउँदै गएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या ९० हजार ८ सय भन्दा बढी पुगेको छ। जसमध्ये निको हुने ६८ हजार ५ सय भन्दा बढी छन् भने २२ हजार ७ सय भन्दा बढी सकृय संक्रमित छन्। हालसम्ममा मृ’त्यु हुनेको संख्या ५ सय ६० भन्दा माथि रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। दिनप्रतिदिन फैलिँदै गएको कोरोना आउँदै गरेको दशैको कारण झन् बढ्न सक्ने भन्दै विज्ञहरुले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेका छन्।
यस अवधीमा सरकारले लकडाउन गर्नुपर्ने अधिकांशको राय छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार अहिलेसम्म सरकारले लकडाउनको तयारी गरेको छैन। उनले भने’ ‘लकडाउनको तयारी छैन। पहिलेको जस्तो मुलुकभर लकडाउन सम्भव छैन। कतिपय ठाउँमा कोरोना छैन ती ठाउँमा कसरी लकडाउन गर्ने?’ दशैं जस्ता चाडबाड मनाउन अर्को साल पनि मनाइन पाइन्छ। सतर्कता अपनाएर जो जहाँ छौ त्यहीँ दशैं मनाऔं’।उनले अगाडि भने, ‘हामी सरकारले केही गरेन मात्रै भन्छाैं हाम्रो जि’म्मेवार के हो भन्ने कुरा ख्याल गर्दैनौं। स्वास्थ मा’पदण्ड अपनाएर मात्रै बाहिर निस्कने गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता ग’म्भिर कुरालाई अझ नागरिकले अ’टेर गर्छन्।’